Inona ny regimen ketogenika? | Nutri Diet
The term ketogenika Izy io dia manondro ny toetoetran'ny ketosis izay misy ny vatana rehefa ny lipida sy ny proteinina no laniana indrindra, ary ny gliosida dia voafetra. Tamin'ny voalohany, dia noforonina mba hitsaboana epileptika maharitra, nefa koa mba hitsaboana tranga sasany matavy loatra, ary mamela ny fihenan-danja haingana, ity sakafo nitarina izy io taty aoriana noho ny fitsaboana ara-pitsaboana nampiharihary ireo olona izay tsy nanao fanaraha-maso ara-pitsaboana matihanina amin'ny risika sasany.
Miantoka ny fiasan'ny, ary noho izany mamokatra fahefana avy amin'ny sakafo, ny vatana dia tsy maintsy mametaka ny otrikaina misy. Amin'ity toe-javatra ity dia omena laharam-pahamehana ny lipida sy ny proteinina. Ara-dalàna amin'ny vatana io fandidiana io satria ampiasaina amin'ny gliosida ny ankamaroany. Amin'ny famakiana ny lipida sy ny proteinina hamokarana angovo dia mamokatra ny vatana vatana ketogenika.
Ny voka-dratsin'ny regimen ketogenika
Na eo aza ny fahaizana lehibe amin'ny fampifanarahana ny zavamiaina, ity toe-javatra tsy ara-dalàna ity dia miteraka residues manimba ny aty amin'ny alàlan'ny lipolysis, manokana ny metabolisation ny lipida hahafahana mamorona angovo. Ny vatana ketôgôniôzy dia tsy maintsy hesorina.
Ho fanampin'izay, hahazoana antoka a fahan'ny kaloria ary tazomy ny hozatry ny hozatra, tsy maintsy mihinana proteinina betsaka kokoa noho izay ilaina ianao, amin'ny fomba toy izao, ny sakafo ketogenika dia mampiharihary ireto loza manaraka ireto:
Ny fanamafisana ny tahan'ny ra misy vokany mifandraika amin'izany,
mampihena ny metabolisma,
fihenan'ny syntetika proteinina,
fiasan'ny aty tsy ara-dalàna
kolesterola avo lenta,
fihenan'ny hakitroky ny taolana.
Noho izany, ny sakafo ketogenika tsy atolotra amin'ny endriny voalohany. Izy io dia afaka manampy amin'ny famoizana lanja amin'ny tranga sasany amin'ny fahasarotana faran'izay mafy, ary amin'ny endrika nasiam-panovana misy 5 gliosida ambany sy andro famerenana indray dia avela hamerina ny metabolisma, ary noho izany ny fihenan'ny lanja. Na izany aza, alohan'ny hahatongavana amin'izany dia tsara kokoa ny manara-dia amin'ny alàlan'ny matihanina ary manolotra paikady tsy dia atahorana hanala ny tavy sy to lose Peso.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Inona ny regimen ketogenika?